Fernando Torres oo ugu danbayn u dhaqaaqay qaarada Eeshiya | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Fernando Torres oo ugu danbayn u dhaqaaqay qaarada Eeshiya
Weeraryahanka reer Spain ee Fernando Torres ayaa si rasmi ah usoo xidhay waayihiisii ciyaareed ee qaaradda Yurub, waxaanu u guuray waddanka Japan oo uu kaga biiray naadiga Sagan Tosu.
Torres oo cimrigiisa ciyaareed ku qaatay saddexda kooxood ee Atletico Madrid, Liverpool iyo Chelsea oo uu guulo badan la gaadhay, ayaa ugu dambayn qaatay dariiqii saaxiibkii Andres Iniesta oo dhowaan heshiis u saxeexay naadi ka dhisan wadanka Japan.
Fernando Torres oo ay da’diisu tahay 34 jir, ayaa ka caawiyey Atletico Madrid inay ku guuleysato tartanka Europa League xili ciyaareedkii tegay, hase yeeshee qandaraaskiisa oo dhamaaday awgeed ayaa uu go’aansaday in aanu wakhti dambe ku qaadanin kursiga kaydka ee Atletico oo uu raadsado koox uu boos joogto ah ka helayo oo lacag badanna siisa, taaas oo noqotay Sagan Tosu oo ka ciyaarta horyaalka heerka koowaad ee Japan.
Wakhtigii uu u ciyaarayey Chelsea, waxa uu ka caawiyey inay ku guuleystaan Champions League, laakiin dalkiisa ayuu sidoo kale u qaaday Koobka Adduunka sannadkii 2010 oo uu ugu daray laba jeer tartanka Qaramada Yurub.
Muddo siddeed sannadood ahayd oo uu ka ciyaarayey horyaalka Premier League oo uu u kala ciyaaray Liverpool iyo Chelsea waxa uu saftay 314 kualn oo uu dhaliyey 126 gool.
Hadal uu warbaahinta siiyey gellinkii hore ee Salaasada ayaa uu ku sheegay inuu dalabyo ka helay France, Germany iyo Spain gudaheedaba, hase yeeshee uu doortay inuu ka baxo qaaradda Yurub oo uu loollan cusub doonto, taas oo noqotay waddanka Japan.
Inta uu joogo kooxda Tosun waxa uu u xidhan doonaa lambarkii uu caanka ku ahaa ee 9.